စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တရုတ် 5kw အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ် ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး Photovoltaic စနစ် > အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်
5kw အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များသည် အော်တိုထိန်းချုပ်မှုအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး relay၊ relay socket၊ time switch၊ 5kw Portable Photovoltaic Solar System၊ AC contactor စသည်တို့ဖြစ်သည်။
စျေးပေါသော 5kw အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ
5kw Portable Photovoltaic Solar System မိတ်ဆက်
5kw Portable Photovoltaic Solar System သည် ပြီးပြည့်စုံသော off-grid ဆိုလာစနစ်ဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို စုဆောင်းကာ ဘက်ထရီထဲသို့ သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး စက်ကိုတင်ရန် AC သို့ ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သည်။ off-grid၊ backup power နှင့် self-consumtion applications များအတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါစနစ်တွင် ပါဝင်သည့်အရာများ။
1. 250W 30V polycrystalline ဆိုလာပြား 6pcs
2. 4000W နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အင်ဗာတာ 1pc၊ 230V 50/60hz puresine wave output တွင် AC အားသွင်းကိရိယာ/အကြီးစား transformer ပါရှိသည်။ အဲယားကွန်း/ရေခဲသေတ္တာ/တီဗွီ/ပန့် အစရှိတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းမျိုးစုံကို တင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
3. 80A 48V MPPT ဆိုလာအားသွင်းကိရိယာ 1pc
4. 12V 200AH ခဲအက်ဆစ်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ဘက်ထရီ 4pcs
5. 6mm2 ကြိုး 50 မီတာ
5kw Portable Photovoltaic Solar System ၏ အားသာချက်များ
Pure sine wave build-in mppt charge controller အင်ဗာတာ
LCD ဆက်တင်မှတစ်ဆင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးကွန်ပြူတာများအတွက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သော အဝင်ဗို့အားအကွာအဝေး
LCD ဆက်တင်မှတစ်ဆင့် အပလီကေးရှင်းများပေါ်အခြေခံ၍ သတ်မှတ်နိုင်သော ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းလျှပ်စီးကြောင်း
LCD ဆက်တင်မှတစ်ဆင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သော AC/Solar Charger ဦးစားပေး
AC ပြန်လည်ကောင်းမွန်နေချိန်တွင် အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ပါ။
90-280V AC တွင်ကျယ်စွာထည့်သွင်းဗို့အား။
ပင်မဗို့အား သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာပါဝါနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဝန်ပို/ ​​အပူချိန်လွန်သည်/ ဆားကစ်တိုခြင်း အကာအကွယ်
ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းဆုံးအတွက် စမတ်ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာ ဒီဇိုင်း
4KVA/5KVA အတွက်သာ 6ယူနစ်အထိရှိသော အပြိုင်လည်ပတ်မှု
hot Tags:: 5kw အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာသော၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်
300w အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာပြားစနစ်
500w အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်
1000w အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်
1kw အိတ်ဆောင် Photovoltaic ဆိုလာစနစ်